यु-१९ एसिया कप : नेपाल श्रीलंकासंग ५ विकेटले पराजित – WicketNepal
यु-१९ एसिया कप : नेपाल श्रीलंकासंग ५ विकेटले पराजित
Birat Jung Rayamajhi, २०७६ भाद्र २०, शुक्रबार १७:२८
श्रीलंकामा जारि अन्डर-१९ एसिया कप प्रतियोगिता अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलंकासंग पराजित भएको छ।
कोलोम्बो स्थित आर. प्रेमदासा स्टेडियममा सम्पन्न खेलमा नेपालले पहिले ब्याटिंग गर्दै दिएको १५९ रनको लक्ष्य श्रीलंकाले ५ विकेट गुमाएर ३४ औं ओभरमा पुरा गर्यो। ओभर घटेकाले श्रीलंकाले १५९ रनको लक्ष्य पाएको थियो।
लक्ष्य पछ्याउने क्रममा श्रीलंकन ओपनर नभोद पर्नभिथाना १२ रन बनाएर पाँचौ ओभरमा रासिद खानबाट आउट भए। त्यसपछि १० औं ओभरमा सागर ढकालले १५ रन बनाएका रसन्था डी सिल्भालाई बोल्ड गरे।
त्यसपछि भने श्रीलंका सम्हालियो। ओपनर कामील मिश्रा र यहाँ विक्रमासिंघेले तेश्रो विकेटको लागि ६० रनको साझेदारी गरे। २१ औं ओभरमा मिश्रालाई रासिद खानले क्याच आउट गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्काए। मिश्राले ६२ बलमा ३ चौका र २ छक्का मदतले ५५ रन बनाए। २२ औं ओभरमा पवन सर्राफले ३० रन बनाएका विक्रमासिंघेलाई क्याच आउट गराए र नेपालको सम्भावना जीवित राखे।
त्यसपछि श्रीलंकाले नेपाललाई हावी हुन दिएन। कप्तान निपुन परेरा र अभिस्का थरिन्दुले पाँचौ विकेटको लागि ४० रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई जित नजिक पुर्याए। परेरा १८ रन बनाएर आउट भए पनि टिम जित नजिक पुगीसकेको थियो। अभिस्का थरिन्दुले अविजित २५ रन बनाउदै टिमलाई जितसम्म पुर्याए।
नेपालको बलिंगमा रासिद खानले सर्वाधिक २ विकेट तथा पवन सर्राफ ( ९-१-२८-१ ) , कमल सिंह ऐरी ( ५-०-३२-१ ) र सागर ढकाल ( ८-०-४९-१ ) ले समान १ विकेट लिए।
कोलोम्बो स्थित आर. प्रेमदासा स्टेडियममा जारि खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिंग गरेको नेपालले निर्धारित ४२ ओभरको इनिंगमा ९ विकेट गुमाएर १५९ रन बनाएको थियो। वर्षाको कारण ९ ओभर सकिंदा खेल रोकिदा ओभर घटाइएको थियो।
Rit Gautam , Rohit Paudel
आजै सम्पन्न समुह ‘बि’ अन्तर्गत दोश्रो खेलमा युएईलाई बंगलादेशले ६ विकेटले पराजित गर्यो। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल समुह ‘बि’ मा रहेको छ जुन समुहमा नेपाल र श्रीलंका सहित युएई र बंगलादेश रहेको छ। आजै युएई र बंगलादेश बीच पनि खेल चलीरहेको छ। समुह ‘ए’ मा भारत, पाकिस्तान, कुवेत र अफगानिस्तान रहेका छन्।